Xiisada u dhaxeysa Deni iyo PSF oo xooggeysatay | KEYDMEDIA ONLINE
BOOSAASO, Soomaaliya - Waxaa cirka isku shareeray xiisada xooggan ee ka dhalatay xil ka qaadistii lagu sameeyey Agaasimhiii hay'ada la dagaalanka argagixisada ee PSF Maxamuud Cabdulaahi Cismaan Diyaano.
Seddxdii maalmood ee ugu danbeysay waxaa Magaalada Boosaaso isku hor fadhiyey ciidamo kala taabacsan Jufooyinka ay ka soo jeedaan Agaasimaha xilka qaadista diiday iyo Madaxweyne Deni, waxaase la sheegaya in iminka ay xaaladdu qaraaraatay, kadib markii lagu guul dareystay waan waantii la waday.
Sidoo kale Saraakiil ka tirsan Dowlada mareykanka oo in muddo ah qalabeynayey hay'adan la dagaalanka argagixisada ee PSF, ayaa soo gaaray Boosaaso, si ay qeyb uga qaataan dadaalada lagu doonayo in xiisada lagu qaboojiyo.
Taliyaha Saldhiga Magaalada Boosaaso iyo duqa Magaaladaasi Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo warfidiyeenada shir jaraa'id u qabtay ayaa ka deyriyey xaalada amaan ee Magaalada, iyagoo xusay in inta badan xaafadaha boosaaso saaka laga barakacay.
Hay'ada la dagaalanka argagixisada Puntland ee loo soo gaabiyo PSF ayaa deegaannada maamulkaasi ka dhisnayd muddo 15 sano ah, iyadoo intii ay dhidibada u taagneydna ay maamulayeen hal qoys oo lagu magacaabo reer Cismaan Diyaano, kaasoo uu ka soo jeedo Asad Cabdulaahi Cismaan Diyaano oo madax ka ah mid ka mid ah xisbiyada ugu saameynta badan degaannada Puntland, isla markaana ah nin ay xurguf badani kala dhaxeyso Madaxweyne Deni.